DUUFAAN AAN CADDAYN (EMCAR) EE LO'DA: CALAAMADAHA, DAAWEYNTA, TALLAALKA - XOOLAHA
Maanta deegaankeena kaliya ee yar yar ee lo'da ee EMKAR ayaa si joogto ah u diiwaan gashan. Si kastaba ha noqotee, cudurkan in ka badan qarni ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu khatarsan ee faafa.
Inta badan dadka qaba cudurkan cudurkan. Si kastaba ha noqotee, haddii aan cudurka la ogaan waqtigeeda oo aan tallaabooyin ku filan looma qaadin, cudurku wuxuu sababi karaa dhaawac halis ah xataa xayawaan aad u ballaaran. Sidaa darteed, maanta waxaan ka hadli doonaa khatarta EMCAR, sida loo aqoonsado, sida loo daaweeyo iyo in laga hortago.
Waa maxay duufanta aan lahayn (EMCAR)
Tani waa infekshan ugu xumaa dhalinyarada. Cadaadis u leh shakhsiyaadka pathogen ee da'doodu tahay 3-36 bilood, xayawaan badan oo waaweyn ayaa leh difaac dabiici ah. Duufaan aan muuqaal lahayn ama EMCAR (waa 'Gangraena emphysematosa') waa cudur si deg deg ah u fiday. Waxaa la socda xummad iyo sameynta murqaha bararka kiniinka.
Anaerobes (Clostridium chauvoei) ayaa loo tixgeliyaa inay tahay nuucyada ugu weyn ee noolaha ee lo'da. Inta lagu gudajiro howlaha, sheygankan waxa uu abuuraa tiro badan oo ka mid ah dukaamada wuxuuna awoodaa inuu sii wado waxqabadyadiisa muhiimka ah sanado badan.
Goobta daaqa iyo meelaha lugahu waxay ku badan yihiin qaybo kala duwan oo ka yimaada saxarada iyo khafiifinta kala duwan ee dadka buka. Clostridium chauvoei waxay si ammaan ah u haysaa waxqabadyada labadaba ee aagga degaanka iyo meelaha aan biyaha lahayn.
Waa muhiim! Kuwa ugu khatarsan waa xeryaha ka soo baxa lo'da dhintay. Fikradda faafinta cudurkani waa mid xad-dhaaf ah, sidaa daraadeed xayawaanka dhintay waa in la gubo ama la geeyaa warshadaha loogu tala galay tan.
Xaalad nasasho, ECAAR-da waxay u sii jiri kartaa ciidda aan la ilaalin sanado. Waxaa intaa dheer, nidaamka hooseeya ee heerkulku uusan saameyn ku yeelan karin waxtarkooda. Si kastaba ha noqotee, qorraxdu si toos ah ayey u burburin kartaa cudurku maalin kasta. Khilaafyada sidoo kale waxay u dhintaan inta lagu jiro laba saacadood oo isku dhafan. Qiyaastii 30 daqiiqo ayaa is-hortaagaya heerkulka + 120-150 ° C. Qalabka jeermiska ayaa ugu fiican ECMAR. Tusaale ahaan, isugeynta maadada mercuric chloride waxay la wareegtaa wareegga 10 daqiiqo, iyo formaldehyde 15 daqiiqo. Xayawaanku wuxuu ku dhacaa hab qarsoodi ah, iyo sidoo kale maqaarka dhaawacan ama xuubka xuubka.
Muddada ijaarashada iyo calaamadaha
Laga bilaabo xilliga infekshinka jirkaaga ilaa iyo inta calaamadaha ugu horreeya ay muuqdaan, 1-2 maalmood ayaa ka gudubta, kiisaska gaarka ah - 5 maalmood. Caadi ahaan, cudurku wuxuu dhacaa si lama filaan ah, waa mid daran waxaana laga helaa kiisaska intooda badan ee foomka caadiga ah ee karbunkus. Xaaladaha qaarkood, ECMAR waxay ku dhici kartaa foom soo noqnoqonaya. Waxaa jira xaalado horumar ah oo dheellitiran oo ku saabsan cudurkan ku jira foomka septic, foomka.
Ma taqaanaa? Duufaan aan muuqaal ahayn ayaa la ogaaday muddo dheer. Si kastaba ha ahaatee, ilaa 1872, cudurka ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah calaamadaha cudurka kudka. Kala duwanaanta cudurka F. Chaber.
Haddii uu jiro xaalad degdeg ah, cudurku wuxuu ku bilaabmaa kororka heerkulka ilaa + 41-42 ° C. Isla markaa, meelaha laga helo muruqyada oo kordhay (qoorta, laabta, bowdaha, croup, mandertibular), marar dhif ah ee afka iyo cunaha ayaa jira barar cad ama qasan. Si degdeg ah ayey u sii kordheysaa.
Boodhida hore waxay leedahay qaab cufan leh waxaana lagu gartaa heerkul sare. Isla mar ahaantaana, maqnaashu waxay keentaa xanuun, markaad burburto, shil baabuur ayaa la maqlaa, iyo markaad taabatid, dhawaaqa qaylo-dhafan oo kala duwan. Marka uu furmo ka soo baxo bararka jidhka, waxaa la sii deynayaa cufaan-wasakhaysan oo cufan ah oo udub dhexaad ah oo leh ur aan fiicneyn oo saliid leh. Marka danbe barar ayaa noqda mid qabow. Maqaarka dusha sare ee madow wuxuu noqonayaa guduud mugdi ah. Qalabka limfaha maxalliga ah waa la bararey oo la ballaadhiyay. Haddii carbuncles ay ka muuqdaan bowdooyinka ama garbaha, xayawaanku wuxuu bilaabmaa inuu jebiyo oo jiido addimada. Haddii infekshanku uu ku jiro afka, afka ayaa badanaa la saameeyaa. Haddii cudurku uu ku faafo caarada, bararka ayaa ka xajisanaya salka hoose ee duufaanta.
Waa muhiim! Xaaladda marka jiritaanka jeermiska uu saameeyo muruqyada qotodheer, cudurka waxaa la sameeyaa oo kaliya marka la furo.
Marka nidaamka infekshanku uu sii kordho, xaaladda xooluhu way ka sii daraysaa. Xaqiiqda ah in cudurku soo baxo wuxuu u sheegi karaa dabeecada lo'da:
dareenka rumaysaduhu wuu baaba'aa;
neefsashada degdeg ah
Later, waxaa jira hoos u dhac ku yimaada hawlaha wadnaha, garaaca garaaca si dhakhso ah (100-120 garaaca daqiiqadii). Dhimashadu waxay ku dhacdaa 1-2 maalmood (mararka qaarkood - 3-10 maalmood). Ka hor dhimashada, heerkulka jirka ayaa hoos u dhacaya waxayna ka hooseysaa heerka caadiga ah.
Koorsada "ultrafast" ee cudurkan waxaa loo arkaa mid aad u dhif ah oo loogu talagalay qaybta ugu badan xayawaanka yar yar ee da'doodu tahay 3 bilood. Cudurku wuxuu ku jiraa qaabka saafiga ah, iyada oo aan la sameyn karin duufaan. Xayawanku wuxuu ku dhinta 6-12 saacadood ka dib. Astaamaha ugu muhiimsan ee foomka hyperacute waa:
gobolka niyad jabsan
Daaweynta foomkan wax natiijo la'aan ah maahan, tan iyo sababo la'aanta calaamadaha tooska ah, waa suurtagal in la ogaado cudurka.
EMCAR waxay ku dhici kartaa foomka qashinka ah. Ma aha wax khasaare ah oo dhimasho ah waxaana lagu gartaa kaliya niyad-jabka guud ee xayawaanka iyo xanuunka muruqyada. Ma jiraan noocyo noocaas ah.
Waa muhiim! Noocyada aan qaliinka lahayn ee duufaanku waa xayawaan badan oo jirran, taas oo, marka la eego ogaanshaha waqtiga cudurka, waxaa lagu daaweyn karaa 2-5 maalmood.
Maadaama ay jiraan noocyo ka mid ah EMCAR ma jiraan calaamado cad, iyo haddii ay dhacdo horumar aad u daran, waxaa lagu wareeri karaa infekshannada kale, ogaanshaha waa in si wadajir ah loo fuliyaa. Si arrintan loo sameeyo, tixgeli:
xogta cilmi baarista waddooyinka ee xayawaankii dhacay.
Inta lagu jiro baaritaanada shaybaarka iyadoo la adeegsanayo habka bakteeriyada. Si loo falanqeeyo falanqayntan, waxay ka dhuubataa meelaha cudurka qaba, qaybaha muruqyada, iyo qashin ka qaadashada edemas. Si aad u hesho natiijo lagu kalsoonaan karo, maaddada waxaa la qaadaa ugu dambeyn 2-3 saacadood kadib dhimashada xayawaanka.
Imtixaanka shaybaarka waxaa lagu sameeyaa dhowr siyood:
Qalabka waxaa loola macaamilaa wakiilada oo la falgeli kara noocyada bakteeriyada shakhsiga ah.
Caabuqa saafiga ah waxaa laga soo saaraa maraq hilibka-peptone ah. Daraasad dheeraad ah oo ku saabsan dabeecadda cudurkan si looga saaro dhaqdhaqaaqa cudurrada kale.
Kiimikada soo baxda waxaa loo maamulaa xayawaannada sheybaarka (badi doofaarka guinea), ka dib markii calaamadaha bukaan-socodka gaar ah la go'aamiyo.
Baaritaanka cudurada wadnaha
Isku-buufinta, isbeddelada pathological ee qaar ayaa la ogaadaa: gudaha unugyada subcutaneous iyo sanbabada caloosha waxaa jira barar muuqda oo meyd ah, dareere qamadi ah ayaa laga sii daayaa sanka.
Ogow waxa lo'da ay jiran yihiin.
Sidoo kale furitaanka waxaad arki kartaa sawirka soo socda:
Meelaha musqusha ay saameysey, bararka badan ee loo yaqaan 'edema edema' ayaa la dareemayaa, marka la furo kaas oo ah barar barar ah oo leh xumbo. Muruqyada waa midab madow iyo casaan, oo ka buuxsamay slipry dhiig.
Marka xayawaanka lagu diyaarinayo dusha sare iyo xuubka maqaarka ayaa laga helaa dhiigbaxa.
Dhiiggu waa guduud mugdi ah, oo la laalaabay.
Beerka ayaa la ballaariyay, wuxuu leeyahay necrotic-ka. Inta badan yar yar, laakiin mararka qaarkood waa muhiim. Xaaladaha qaarkood, waxay isku daraan, taas oo ah sababta beerku uu u dhisan yahay qaabab badan.
Cagaarshowgu wuxuu ka buuxsamaa dhiiga, boodboodka.
Hababka halganka iyo daaweynta
EMCAR waxaa loo tixgeliyaa cudur si buuxda loo daweyn karo. Daaweyntu si gaar ah ayay waxtar u leedahay baaritaanka hore.
Waa muhiim! Veterinarians ayaa ka digaya in haddii la tuhunsan yahay duufaan aan caadi ahayn, waa suurtagal in la furo meydka xaaladaha aan u qalmin tan - suurtagalnimada caabuqu wuu sareeyaa.
Isla markiiba ka dib marka la aqoonsado xayawaan buka, waa la go'doomiyay. Muraayada waxaa lagu daaweeyaa jeermis dilaha:
Aaga lugaynta waxay ku xiran tahay nadiifinta farsamada iyo kicin dheeraad ah. Carrabka ku yaala goobta uu shilku ka dhacay ayaa la gubay, oo laga waraabiyey muraayad (10 litir 1 mitir oo laba jibbaaran), qoday qoto dheer oo ah 25 cm oo isku qasan oo leh qallal qallalan (feejignaan aan ka yarayn 25%) heerka 1 qaybood ee diyaarinta 3 qaybo ka mid ah ciidda. Kadib qaabsocodka, ciidda ayaa qoyan. Isku-duubka oo xayawaanka bukaanka ah ku yaala waxaa sidoo kale lagu duraa jeermi-dilis joogto ah. Joogista daaweynta: hal mar maalintii, sida ku qoran jadwalka iyo ka dib saxarada kasta oo jirran. Cuntada haray waa la gubayaa. Haddii ay jirto kiis, ka dibna meydadka xayawaanka dhintay, cawska, digada, alaabta daryeelka ee laga shaqeeyay shaqada, waa la gubay.
Waa muhiim! Karantiilka waxaa la saaraa kaliya marka calaamadaha caabuqa aan muuqan 14 maalmood gudahood.
Marka lagu baaro duufaan aan qallafsaneyn, beerta si dhakhso ah ayaa loogu xiray karantiilka, inta lagu guda jiro sharciyada soo socda:
Waa mamnuuc in xoolaha dibedda laga dhoofiyo laguna wareejiyo beeraha kale;
illaa dhammaystirka dhamaystirka cudurkan, waa in aanad isku darin kooxo habeysan oo xayawaan ah;
dhammaan xoolaha aan la tallaalin qorshaha;
keydka cuntada, qashinka iyo digada aan laga saari karin beerta;
Ha isticmaalin caano iyo hilib laga helo xayawaanka qaba cudurka.
Daawooyinka xayawaanka ah
EMCAR waxay u baahan tahay habka isku dhafan ee daaweynta. Daawooyinka muhiimka ah ee loo isticmaalo kiiskan waa antibiotics. Hase yeeshee, isla mar ahaantaa, waxay isticmaalaan jeermi-dileyaasha, kuwaas oo lagu duro subagayn, iyo sidoo kale xargaha carbuncles leh xalal gaar ah. Inta badan, daaweynta infekshanka isticmaalaya daroogooyinka (dhammaantood waxaa lagu sameeyaa intramuscularly):
Penicillin. Hal cirbad ayaa la maamulaa 6-dii saacadoodba mar ilaa dhameystirid dhamaystirka ama xasilinta xaaladda guud. Qiyaasta - 3000-5000 oo qiyaas ah 1 kg oo ah miisaanka xoolaha.
Biomitsin. Gali hal mar shan maalmood. Qiyaasta - 3-4 mg halkii 1 kg ee miisaanka.
Dibiomycin. Tirada - 1 hal mar oo hal mar ah. Qaadashada - 40000 halkiiba 1 kg oo ah miisaanka nool.
Amoxicillin. Tirada irbadaha - 2 koorso oo leh mudo ah 2 maalmood. Qiyaasta - 15 mg halkii 1 kg oo miisaankeedu yahay.
Dhowaan, daawada antibioteca cusub ee cephalosporin ayaa soo muuqday, taas oo ah mid aad waxtar u leh. Dhibaatadooda kaliya - waxay ka qaalisan yihiin kuwa caadiga ah. Isla markaa isticmaalka antibiyootikada, meelaha ay dhibaatadu saameysey ayaa la gooyaa jeermiska. Isticmaalaan:
5% xalinta lysol;
2% xalinta hydrogen peroxide;
4% xalalka karboksilic acid;
0% xal manganese ah.
Dhamaan irbadaha waxaa si toos ah loogu sameeyaa qoraalka dillaaca.
Waa muhiim! Qaadashada wareegga buro ma shaqeyn doonto, waxaana loo tixgeliyaa micno la'aan.
Haddii dhuunta la furo oo ka daadsan ay ka soo baxdo, markaa meelahaas waa in si nidaamsan loo tirtiraa xal xashiishad ah ama bacriminta peroxide.
Kahortagga iyo Talaalka
Ka dib markii cudurku ku dhaco, difaaca jirka waa la sameeyaa. Hawlaha muhiimka ah ee noocyada kala duwan:
Talaalka sunta aluminium ee kuleylka leh. Ilaalinta jidhka 6-7 bilood.
Diyaargarowga noolaanshaha jirka. Waxay difaacdaa difaaca jirka 12 bilood iyo ka badan.
Dhiig karkaar ah oo ka soo horjeeda duufaan maligni ah oo aan muuqaal lahayn.
Si looga hortago cudurrada faafa, samee rugta caafimaadka xoolaha:
Xayawaanka cusub ee la korsaday ayaa lagu hayaa karantiil ka hortag ah.
Samee tallaal dhammaan dadka nugul ee ku nool gobollada aan dhibaatada laheyn.
Dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 3 bilood ilaa 4 sano jir waa la tallaalaa sanadkiiba. Iyadoo ku xiran xilliga socodka ama qaabka tallaalka, dhacdooyinka waxaa la qabtaa 1-2 jeer sanadkii (2 toddobaad ka hor bilawga xilliga daaqa iyo lix bilood kadib).
Daaqsiinta lo'da waa in lagu sameeyaa socodka qadar yar oo ah qoyaan.
Waxaad xayawaan biyo ah ka dhigi kartaa biyo nadiif ah.
Cunto waa inay ahaato mid tayo sare leh. Ha u oggolaanin in la cuno qayb ka mid ah qaybaha ciidda, qashinka iyo qashinka kale.
Haddii inta lagu jiro kormeerka lo'da waxaa jira walaac ku saabsan joogitaanka EMCAR, shakhsiyaadka waxaa si degdeg ah loogu wareejinayaa karantiilaha.
Cawska iyo xarumaha kale ee dhirta ayaa si joogta ah loo nadiifiyaa.
Adiga kuma socon kartid xayawaanka ku dhow xayawaanka lo'da.
Ma taqaanaa? Xidhiidhada juqraafi ama cimilada-jawiga ee EMCAR laguma dhicin. Nozareal wuxuu daboolayaa dhammaan goobaha dabiiciga ah.
Sida aad arki karto, EMCAR waxay ka mid tahay infekshannada khatarta ah ee lo'da, taas oo inta badan ku dhamaata dhimashada xayawaanka yaryar. Way adagtahay in la daaweeyo caabuqa, xaaladaha badankoodna wax kasta oo dhimasho ah. Sidaa daraadeed, diirada ugu weyn waa in ay ahaato tallaabooyinka ka hortagga iyo tallaalka si looga fogaado infakshanka guud.